Su'aalaha badanaa la isweydiiyo Windows 8 Interface Interface
Maxaan U Baahan Yahay Inay Wax Ka Ogaato Windows 8 ee UI Cusub?
Su'aal: Maxaan u Baahanahay Inay Ogaato Sida Loogu Talagalay Windows 8 UI?
Waxaa laga yaabaa in isbedelka ugu weyn ee Microsoft ee la sameeyey nidaamka Windows 8 ay tahay isdhexgalka interface dhamaystiran oo cusub . Isticmaalayaasha nidaamyadii hore ee Windows-ka ayaa laga yaabaa inay nafsad ahaantooda jahwareer ku galaan maqnaashaha Start iyo barnaamijyo cusub oo aan lahayn khadka cas ee "X". Waxaan soo diyaarinnay liiska su'aalaha inta badan la isweydiiyo si ay uga caawiyaan dadka isticmaala arimahooda ugu horeeya ee ugu dambeeyey ee Microsoft.
Halkaas waxaa loo yaqaan 'Metro'.
Markii Windows 8 markii ugu horreysay loo soo bandhigay dadweynaha sannadkii 2011, Microsoft ayaa ku muujisay xidhiidh cusub oo taabasho ah "Metro." Sababtoo ah arimaha saameynta lahaanshaha ee shirkad wadaag ah oo Jarmal ah, Microsoft ayaa tan iyo markaas magaceeda hoos u dhigtay si sahlan oo loo wici karo Windows UI cusub ama Windows 8 UI.
Halka & # 39; mar dambe Miiska Start
Halkii ay isticmaali lahaayeen interface interface si ay u soo galaan codsiyada, Windows 8 ayaa u wareegay qaab sawireed muuqaal ah. Waxaad awoodi kartaa inaad aragto shaashadda cusub ee bilawga ah adigoo gujinaya geeska hoose ee miiskaaga meesha aad ka filan lahayd badhanka Start. Windows 8 wuxuu abuuraa xiriiriyo leydiin ah ee barnaamijyadaada loo yaqaanno faybar. Haddii aad leedahay barnaamij la rakibay laakiin aadan u arkin faylka, waxaad xaq u-riixi kartaa taariikhda "Screen Start" ka dibna riix "All Apps" si aad u aragto wax kasta oo lagu rakibay kombuyuutarkaaga. Aragtaan guud oo dhan waxay u badan tahay inay kuu raaxaystaan ​​adiga haddii aad u jilicsaneysid menu.
Codsiyadaada caadiga ah ayaa weli shaqeeya.
Inkastoo Microsoft ay runtii riixeyso barnaamijyada cusub ee Windows 8 ee xiisaha leh, qaabka buuxa ee nidaamka qalliinka ayaa taageeraya barnaamijyada ugu badan ee aad isticmaali kartid Windows 7. Waxaad rabi laheyd inaad ceejisato inkastoo Windows 8 oo loo yaqaan Windows RT, oo maamula gaar ahaan qalabka mobile, waxay xadidaa isticmaalayaasheeda si loo isticmaalo barnaamijyada Windows 8 oo keliya.
Dukaanka Windows wuxuu leeyahay dhammaan barnaamijyada casriga ah ee aad qaban karto.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso barnaamijyada cusub ee Windows 8, waxaad ka soo dejisan kartaa dukaanka Windows . Raadi foorno cagaaran oo ku taal shaashadaada bilawga ah ee lagu keydinayo Dukaanka. Waxaad ka raadin kartaa codsiyada la heli karo oo u soo guurin qalabkaaga.
Barnaamijyada Windows 8 ma laha calaamadaha caadiga ah ee aad ka filan kartid.
Si aad u furto barnaamijka Windows 8, waxaad riixi kartaa ama ku dheji kartaa faybar shaashadda bilowga. Barnaamijyadani had iyo jeer waa kuwo buuxa oo buuxa mana haystaan ​​badhannada badhkii aad isticmaali lahayd si aad u xirto arjiga desktop. Si aad u xirto barnaamijka Windows 8, waad iska bedeli kartaa (hoos ka fiiri), waxaad riixi kartaa dusha sare daaqadana ku jiid jeeska hoose ee shaashadda, ama waxaad awoodi kartaa inaad riixdid ama aad riixdo boodhka menu oo guji dabool. Dabcan, waxaad sidoo kale ka dili kartaa Maamulaha Hawlaha .
Adiga & # 39; waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho afarta geesood ee Windows 8.
Haddii aadan waligaa maqlin afarta geesood ee Windows 8, waxaad arki doontaa marka la soo sheego marka aad marka hore sameysato Windows 8 OS. Tani si fudud ayaa loola jeedaa xaqiiqda ah in Windows 8, adigoo ku dhejinaya mid ka mid ah afarta geesood ee shaashaddaada waxay furi doontaa wax.
Hooska ama sare-dhinaca midig - Kursigaaga ku yaal mid ka mid ah jumladaha midigta ayaa furan liiska furaha . Maqaalkani wuxuu bixiyaa xiriiryo qalab iyo farsamo oo aad si joogto ah u isticmaali doonto sida caadiga ah app, goobaha kombiyuutarka, iyo jilitaanka raadinta.
Hooska-bidix - Galka hoose-bidix wuxuu furayaa isku xirka shaashada bilowga.
Gadaal-bidix - geeska kore ee bidix wuxuu furayaa xiriirka ugu dambeeya ee aad ku lahayd feejignaanta. Tani waxay u ogolaanaysaa isbedel deg-deg ah oo u dhexeeya barnaamijyada Hoos uga soo deg dhinaca geeska sare ee bidix si aad u furto liiska furaha kaasoo soo bandhigaya dhammaan barnaamijyada furan. Waxaad markaa ka dooran kartaa app ka mid ah liiska si aad u keento diiradda.
Inkastoo ayaaba la taaban karo taabashada, Windows 8 UI wuxuu si weyn u shaqeeyaa kumbuyuutarka iyo fareebka.
Inkasta oo Windows 8 UI ay ugu fiicantahay jawiga taabashada leh, haddana wali waxay ka shaqeyneysaa mashiinka ama laptop-ka leh jiirka ama fiilada.
Shaashadda qufulka ayaa laga yaabaa inay isku kalsoon tahay dadka isticmaala desktop.
Haddii aad isku aragto wareer markaad isku dayeyso inaad ku gasho xisaabtaada sababtoo ah ma aragto meel aad ku qorto eraygaaga sirtaaga ama aad doorato xisaabtaada isticmaale, ha welwelin. Windows 8 wuxuu isticmaalaa shaashad furan oo soo bandhigta asalka khaaska ah iyo ogeysiis la xakameyn karo marka xisaabtaada la xiro. Si fudud u riix furaha furahaaga kumbuyuutarka, shaashadda qufulkuna waxay ku dhajin doontaa muujinta asturnaanta xisaabtaada.
Sidee loo xoojiyaa Browser-kaankaaga
Shanta Shanaad ee Waxyaabaha Aad Ku Bixinayso Kombiyuutarkaaga Cusub
Waa maxay MOM.exe?
Fahmidda Khiyaarada Doorashada ee Windows 7
Farqiga u dhaxeeya Thraceback Thursday iyo Flashback Friday
StarCraft II: Qodobada Nidaamka Nidaamka Xoriyadda
Linux / Unix Talooyin ah si aad u ogaato
Isbeddelka PowerPoint 2007 iyo 2003 Sawirada Sawirrada Dukumiintiyada
Meelaha Shabakadaha Bulshada ee ugu sareeya
Sida Loogu Gubo Daabacaadda Fududo Buuxda Laga Helo Mashiinka Mashiinka ah
Waxyaalahaada PC-ga ayaa sameyn kara in iPad-gaagu aanu awoodin
Waa maxay xarunta ciyaaraha iyo maxaa ku dhacay?
MOG Dib u Eegista: Diyaargaroobida aan Xadka lahayn ee Taageerada Mobile
Sida Loo Diro Email Adigoo leh Yahoo Mail
Fahmidda Macnaha Mawduuca Bogga
Sidee loo xirxiraa qalabka Bluetooth ee iPhone
Dukumiintiyada Dheeraadka ah ee Macmiilaha Macmiilaha leh Tricks Kuwani
Sidee loo Nadiifiyaa Lacagta Kumbuyuutarka ee iPhone
Sidee baan Video ugu dhejiyaa Kombiyuutarkayga?
15 Views Views ama Panes Waxaad u isticmaali kartaa in Microsoft Office